Ahoana ny fomba firaketana ny birao Ubuntu 18.04 na famoronana horonan-tsary avy amin'ny birao | Ubunlog
Ahoana ny fomba fandraisam-peo ny birao Ubuntu 18.04 na mamorona horonan-tsary avy amin'ny birao
Ilaina hatrany ny maka sary na manao horonantsary avy amin'ny birao anay na ny rindranay. Soa ihany, ao amin'ny Gnu / Linux sy Ubuntu dia misy rindranasa maro hanaovana izany nefa tsy mila mandoa rindrambaiko matihanina. Ny kinova farany an'ny Ubuntu, Ubuntu 18.04 dia manolotra antsika ihany koa ny mety hamoronana horonantsary avy amin'ny birao tsy mila rindrambaiko fanampiny.
Mba handraisana an-tsoratra ny birao ao amin'ny Ubuntu 18.04 dia mila fanamafisana fanalahidy fotsiny isika ary hanoratra izay ataontsika i Ubuntu ary hitahiry azy ao amin'ny fampirimana horonan-tsary ao amin'ny fampirimana an-trano.
Hanombohana ny firaketana ny birao mila manindry ny bokotra Ctrl + Alt + Shift + R ihany isika amin'ny fotoana iray. Io fampifangaroana io dia samy hanomboka hanoratra na hijanonan'ny firaketana. Na izany aza, ity fitaovana Gnome ity dia manana fetra 30 segondraIzany hoe, afaka 30 segondra ny horonan-tsary dia hijanona ny fandraisam-peo.
Azo ovaina ity ny fitaovana dconfMba hametrahana ity fitaovana ity dia mila manokatra terminal izahay ary manoratra izao manaraka izao:
Aorian'ny fanatanterahana an'io dia hiseho ao amin'ny menio fisoratanay ny mpampanonta dconf. Izahay dia manatanteraka azy ary amin'ny milina fikarohana dia manoratra ny teny «Screencast» izahay, hiseho ny varavarankely mitovy amin'ity iray ity:
Amin'ny safidy izay manana ny isa «30» izy io manova azy io amin'ny fotoana ilainay handraketana azy. Ao anatin'ny segondra vitsy ny fotoana, izany hoe raha manova amin'ny "1" isika dia ho iray segondra ny fotoana fa tsy iray minitra.
Ity fitaovana Gnome ity dia mirakitra ny birao iray manontolo, tsy mirakitra ampahany amin'ny birao izany, koa raha te hanao an'io isika dia mila mandeha fitaovana feno kokoa toy ny Simple Screen recorder na VLC.
Ity fampiasa amin'ny birao Ubuntu 18.04 ity dia mahatonga azy ho birao mavesatra kokoa nefa miasa ihany koa, mahatonga ny mpampiasa hanana ny safidy rehetra hatramin'ny andro voalohany, tsy mila mametraka rindrambaiko bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fomba fandraisam-peo ny birao Ubuntu 18.04 na mamorona horonan-tsary avy amin'ny birao
Sheba dia hoy izy:
Tsara, nitady programa hanoratana ny efijery aho ary hitako fa tsy mila izany aho. Vao avy nanery an'io fitambarana io aho ary efa manome ahy ny hevitra miaraka amin'ilay teboka mena. Ankehitriny dia tiako ny afaka manoratra iray monja fa tsy izy roa. Mampiasa monitor 13 '(kahie) sy monitor 19' aho.
eyder dia hoy izy:
Ahoana no fomba hikirako azy mba hahafahanao mirakitra ilay audio amin'ilay horonan-tsary?
Mamaly an'i Eyder
Mila fantatro ihany koa ny fomba handrindrana azy handraisana horonantsary am-peo.
TM20737 dia hoy izy:
Tsy afaka mandray an-tsoratra aho, misy manampy ahy
Valiny amin'ny TM20737
Salama, manoro hevitra ireto lahatsoratra ireto aho:
Izaho manokana dia mieritreritra ny tsara indrindra no farany. Ampidiro ao amin'ny trano fivarotana ofisialy.
Cpod, fampiharana podcast tsotra noforonina tamin'ny electron
FreeFileSync: ampifanaraho sy ampirimino ny angon-drakitrao sy ny rakitrao